Shaikh Shariif oo durba bilabay Faragalinta Shirkii Jowhar.. | Kismaayo24 News Agency
Shaikh Shariif oo durba bilabay Faragalinta Shirkii Jowhar..
Friday September 23, 2016 - 4:20 under Breaking News by admin
Dib ugu laabashada Shariif Sheekh Axmed ee magaalada Muqdisho ayaa astaan hor dhac ah u sii ah musharaxnimadiisa mar kale qabashada xilka madaxweynaha dowladda Soomaaliya, taasoo ay ku tarti doonaan siyaasiyiin wajiyo iyo muuqaalo kala duwan leh, laakiin guud ahaan marka aad eegto aragtida isaga mid ah.
Xassan Sheekh Max’uud ayaan mahdin dib u soo laabashada madaxweynihii uga horeeyay kursiga madaxnimada, sababo badan oo siyaasadeed awgood.
Ugu horeyn warar soo baxaya ayaa sheegaya in Shariif Sheekh Axmed damacsan yahay kala dirista ergada ku sugan magaalada Jowhar ee dhismaha maamulka labada gobol, madaama qorshaha Xassan Sheekh ee dadajinta maamulkaasi qeyb ka yahay olalihiisa doorasho isaga oo doonaya in madaxweynaha halkaa ka soo baxa uga soo xulo labada gobol xildhibaanno marka danbe isaga soo doorta.
Shariif Sheekh Axmed oo arintaa ka dharagsan ayaa ilo xog ogaal ah oo lagu kalsoonaan karo waxaa ay sheegayaan in maalmaha soo socda bilaabi doono qorshayaal lagu kala fur furayo odayaasha iyo ergada halkaa joogta, gaar ahaan waxgaradka dhaqanka beesha Abgaal oo sidda warar hoose oo baxaya sheegayaan in qarkoodba shalay halkaa isaga tageen si ay uga qeyb-qaataan soo dhaweyntiisa.
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo dagaal siyaasadeed culus la gali doona Xassan Sheekh Max’uud ayaa siddoo kale qorsheynaya booqasho uu ku tagayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isaga oo la kulmi doona Ugaas Xassan Ugaas Khaliif oo ah hogaamiye dhaqameed awood badan ku dhax leh siyaasada Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa hadda siweyn loo hadal hayaan dib u soo noqoshada Shariif Sheekh Axmed oo ah siyaasi dhalinyarro ah dadkuna ku xasuustaan xil wareejintii dimuquraadiyada ku dhisneyd 10 September 2012 markii looga guuleystay xilka madaxtinimada.